Ikhwalithi ye-PCB Fabrication - iPandawill Technology Co, Ltd
Ikhwalithi ukukhathazeka kwethu okuyinhloko. Ukuhlinzeka ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme kanye nezicelo zamakhasimende ezenelisa ngokuphelele kugxilwe ngokuqinile emqondweni wawo wonke umuntu ePandawill. Lokhu kuqala ngokushesha lapho idatha yakho ifika futhi ihlala kuze kube ngemuva kwensizakalo yokuthengisa. Ukulawulwa kwethu kwekhwalithi ikakhulu kufaka izingxenye ezintathu:
Le nqubo ukulawula abahlinzeki, ukuqinisekisa izinto ezingenayo, nokusingatha izinkinga zekhwalithi ngaphambi kokukhiqizwa.
Abahlinzeki bethu abakhulu bahlanganisa:
Uyinki: UNanya, uTaiyo.
Ukulawulwa Kwekhwalithi Yokuhlola Nokuhlolwa
Ukuqala ngokulungiswa kwemiyalo yokukhiqiza (i-MI), ngokuhlolwa kwenqubo, kuya ekuhlolweni kokugcina, ukulawulwa kwekhwalithi yebhodi lesifunda eliqediwe liyingqikithi ephindaphindayo kulo lonke uhlelo lokukhiqiza.
Ngenkathi ukuthembeka nokunemba kwezinyathelo zokucubungula zamakhemikhali nokwenziwa kwemishini kuqinisekiswa ngokuhlaziywa okubhalwe phansi kuyo yonke inqubo kanye nezinyathelo zokulungisa, wonke amabhodi wesifunda akhonjelwa ekuhlolweni okukhulu okuphakathi naphakathi kokugcina. Lokhu kuqinisekisa ukuthi imithombo yamaphutha angatholakala ngokushesha futhi ixazululwe unomphela. Amabhodi wesifunda azohlolwa uma kuthelekiswa nezidingo eziphakeme ze-IPC-A-6012 Class 2 ezaziwa umhlaba wonke.
Ukuhlola nokuhlola kufaka:
> Ukuhlolwa kwedatha yamakhasimende (i-DRC - I-Design Rule Check)
> Ukuhlolwa kwe-elekthronikhi: amavolumu amancane ahlolwe nge-probe endizayo nochungechunge olukhulu kunokusebenzisa i-Fixture E-Test.
> Ukuhlolwa kwe-Optical Optical: kuqinisekisa isithombe sokulandela umkhondo womqhubi ophambukile ku-Gerber futhi uthola amaphutha okungenzeka i-E-Test ingawatholi.
> I-X-Ray: khomba uphinde ulungise ukufuduswa kongqimba nezimbobo zokubhola kwinqubo yokucindezela
> Ukusika izingxenye zokuhlaziywa
> Ukuhlolwa kokushaqeka okushisayo
> Uphenyo oluncane
> Ukuhlolwa kokugcina kagesi
> Ukuhlolwa kokugcina kokubukwa kwamabhodi wesifunda
> Ukupakisha komshini futhi kuvaliwe ebhokisini ukulethwa.